Indlela yokufunda ukuthembela indoda
Uthando ngaphandle kokuthembela lutho, kodwa nakanjani akuthandi. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi kusukela ekuthembeleni kumuntu wakhe, kuncane kakhulu kwesokunxele lapho ehlolwa amandla amaningi izikhathi eziningi. Kunezibalo, ngokusho ukuthi imibhangqwana eshadile engaphezu kuka-70% yajwayele lesi simo, hhayi ngezwi lokuzwa. Noma iyiphi inkinga ingasombulula, ngakho-ke, ungafunda nokuthembela kumuntu.
Okokuqala, kunesidingo ukucacisa isizathu sokuthi owesifazane wesifazane angamhloniphi indoda yakhe ngokungahambisani nendoda yakhe. Lapha, ukhetho lucebile futhi alinamkhawulo ukwesaba okuvamile nokuzwanela ngokweqile ekuhlangenwe nakho okungaphumelelanga esikhathini esidlule. Wonke umuntu ohlangabezane nalokhu, yena ngokwakhe, ubonisa izimbangela zenkinga.
Uhlu lwezinto abantu abangathembeki umngane abalahlekelwa yiyo, kungaba isikhathi eside kakhulu, into eyinhloko ukuthi ubudlelwane obubekwe ukungathembeki komunye wabalingani abulethe injabulo kokubili. Uma ubuhlobo bakho bubalulekile kuwe, kufanele ulwe nokungathembeki kuze kube yilapho kungenzeka. lapho lolu hlobo lokungabaza ludlulela ekhanda lakho, okwenza ube nomuzwa wokuhluleka kwengqondo, ucabange: "Ingabe kukhona isizathu salokhu, noma ngisuke ngizibophezela nje?" Uma kuvela ukuthi kunesizathu, kuyadingeka ukuyiqonda, kungaba yedwa noma kuhlangene umlingani wabo. Konke kuncike ekutheni konke kuyingozi kangakanani. Emva kwakho konke, ungaphuma futhi ukuze uphendule ngokucacile ibinzana eliphonswe ngengozi, noma isenzo esingenangqondo.
Ngeke kube nobuhlobo obuhle, obuvumelanayo uma kungekho ukuzethemba phakathi kwabantu ababili abakha umbhangqwana. Lapha isifiso esiyinhloko, uma kukhona isifiso sokuthembelana, kufanele nje ulandele imithetho ethile:
Awudingi ukucabanga ngalokho okwenzekile ebuhlotsheni obudlulile, ikakhulukazi uma kungekho lutho oluhle kubo, futhi mayelana nobuhlobo obungaba nomunye umuntu. Asikho isidingo sokuphuthuma ngokweqile, ucabanga ukuthi konke kuyoba kubi njengesikhathi sokugcina, noma ukucabanga ukuthi kunomuntu okungcono. Phila okwamanje, ikakhulukazi uma ukhululekile futhi ukhululekile ebuhlotsheni bamanje. Kungani bonke baphanga zonke izinhlobo ze "ifs"? Ngemuva kwalokho, kwaziwa ukuthi imicabango iyenzeka, ngakho-ke faka isimo sakho sengqondo futhi konke okuyoba nakho.
Ungasolisi futhi usolise. Isikhundla "isinyathelo sokuya kwesinyathelo esifanele kuya kwesobunxele - ukudubula" asamukelekile ebuhlotsheni. Ungacindezeli kumuntu wakho, ungenzi ukuphenya kanye nabahlaziyi, ngoba nje ubambezeleke emaminithini angu-10 emsebenzini, noma uphendule i-SMS yakho hhayi ngokushesha njengoba ulindele.
Ungenzi njalo indoda yakho ivulele icala phambi kwakho. Bheka le fomethi yokuxhumana evela ngaphandle, ingabe uyayithanda ngempela? Ungamhlambalazi ngaso sonke isikhathi ngento ethile, ikakhulukazi uma izinsolo zingenasisekelo futhi azikho ubufakazi, ngaphandle kokucabanga kwakho. Cabanga ngeqiniso ukuthi ngokushesha noma kamuva angase abe nesithukuthezi ngakho, futhi uzofuna ukubalekela kuwe.
Thembela umuntu oseduze nawe. Futhi kungani? Kungani kudingekile ukuhlazisana ngokusola njalo, ukuhlola izingcingo kubangani bakhe noma osebenza nabo noma ukubuka uhlu lwakhe lwamakholi kanye ne-SMS ngokuqhubeka nokuphenya ngentshisekelo yesihloko, "Kuyini lo Anya, okhulume naye ngamaminithi angu-10?"
Nikeza indlela yokuhlekisa, hhayi amahlazo. Izimo zihlukile, njengokuba ungazitholela ngephutha isimo esingaqondakali, awudingi ukuthululela kuye izinkulumo zokumangalela, kungcono nje ukuhleka ndawonye ngalokho okwenzekile.
Khumbula, uma umlingani wakho ebona futhi ezwa ukuthembela kwakho kuye, uzobe ethembekile futhi avuleke nawe. Ngamanye amazwi, uzothola ubuhlobo nempendulo emihle.
Uma uqhubeka ukuhlukumeza indoda yakho ngaso sonke isikhathi ngezinsolo ezingenakuqhathaniswa, khona-ke ngaphandle kokuyiqaphela, mqhubekele eqinisweni ukuthi uzoqala ukwenza izinto ongadingeki wazi ngazo. Uyanquma ukuthi kunokulalela izikhalazo zakho njalo, kunengqondo ukuthi ube nomkhiqizo ohlangothini, kanye nesizathu sangempela sokunganeliseki kwakho.
Konke okushiwo ngaphambili akufaki ukuthi kungenzeka ukuthi indoda empeleni indoda engafanelekile ukuthembela iyingxenye. Ekuphileni konke kwenzeka. Futhi uma lowo muntu engayithinti imizwa yakho, ngokucacile akakukhathaleli ngawe, awukwazi ukumfuna izizathu ezingapheli futhi usebenzise imizwa yakhe engcono kakhulu kuye. Asikho isidingo sokuzihlukanisa kumuntu, ngeke sikulethe injabulo nenjabulo. Udinga nje ukuzama ukubheka amehlo akho ngangokunokwenzeka ngokucophelela, ukubona isithunzi sakhe kanye nokwehluleka kwakhe. Abantu abalungile abakho, kungcono ukwamukela. Vele unqume ukuthi yikuphi kokushiyeka kwawo okulungele ukwamukela, futhi okungekho.
Kuthiwani uma uthola amantombazane amabili?
Indlela yokusiza umyeni wakhe basinde enkingeni yobudala obuphakathi
Lapho intombazane ikhulile kunomfana iminyaka engu-6
Kungani amantombazane abathanda abantu ababi?
Indoda - indodana yendodana
Yini ongayinika indoda
Ilayisi enenkukhu nemifino
UMaxim Galkin wakhuluma ngemidlalo eyintandokazi kaLisa noHarry. Izithombe ezintsha
Iphalishi yebhali enenkukhu kanye neqoma endaweni eningi
Indlela yokukhetha ukunqunywa kwenwele nezinwele
Ukunakekelwa Kwezinyawo Nezipikili
Indlela yokusebenza yabesifazane isebenza kanjani?
Ukuntula i-iron ezinganeni ezincane
Ukudla kwansuku zonke ngehlobo legazi
Indlela yokunqoba inkinga yeminyaka eyisikhombisa
Isithunywa Sevangeli Sibheka Ngocansi